ပိုလှချင်လို့ ခွဲစိတ်မိကာမှ ရုပ်ဆိုးသွားလို့ ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ Apink အဖွဲ့ရဲ့အဆိုတော်မလေး
20 Apr 2018 . 3:36 PM
ကိုရီးယားသူ ငယ်ငယ်ချောချောလေးတွေနဲ့ Plastic Surgery ဆိုတာ သမာရိုးကျဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် ခွဲမြင်လို့မရတဲ့ အလေ့အထတွေပါပဲ။လူမျိုးတစ်မျိုးလုံးရဲ့ အခြေခံမျက်နှာသွင်ပြင်ဗီဇအရ အာရှနိုင်ငံတွေမှာမှ ကိုရီးယား၊ တရုတ်နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက လူမျိုးတွေဟာ မျက်ရစ်မပါတာမျိုး၊ မျက်နှာပြဲပြီး နှာခေါင်းမပေါ်တာမျိုးတွေကြောင့် ပုံမှန်ကြည့်ကောင်းတဲ့ မျက်နှာတစ်ခုရအောင် ခွဲစိတ်ပြုပြင်ကြရပါတယ်။
Apink Member Nam Joo
နာမည်ကြီး မင်းသားမင်းသမီး Celebrity တော်တော်များများလည်း အလားတူ အောင်မြင်မှု၊ ချောမောလှပမှုတို့အတွက် ခွဲစိတ်လေ့ရှိကြပေမယ့် ဒီအဆိုတော်မချောချောလေးရဲ့ ခွဲစိတ်မှုကတော့ ပရိသတ်အများစုလက်မခံနိုင်ဘဲ ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုတွေ သောသောညံခဲ့ရပါတယ်။
သူမကတော့ ကိုရီးယား နာမည်ကြီး Apink အဆိုတော်အဖွဲ့က အဖွဲ့ဝင် Nam Joo ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးအဖွဲ့ဝင် ငယ်ငယ်ချောချောလေး ၆ ယောက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Apink အဖွဲ့မှာ အားပေးသူပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ Nam Joo ကို သူမရဲ့ခွဲစိတ်ထားပုံရတဲ့အသွင်အပြင်အသစ်နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ March လ ၂၄ ရက် ကကျင်းပတဲ့ Baseball ပြိုင်ပွဲတစ်ခုရဲ့ အကြို ဖျော်ဖြေပွဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲအပြီးမှာ အရင်နဲ့မတူ တမူထူးခြားနေတဲ့ သူမရဲ့ နှာခေါင်းနဲ့ မျက်နှာအနေအထားကို သတိပြုမိတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ သဘောထားတွေ ဆက်တိုက်ဆိုသလိုတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
မပြင်ခင်(လက်ဝဲဘက်) နှင့် ပြင်ပြီး (လက်ယာဘက်)
ဒါ့အပြင် Apink အဖွဲ့ Public Relations Ambassadors အဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ Korea-Africa Economic Cooperation Conference မှာလည်း သူမမျက်နှာပြောင်းလဲမှုကို မြင်တွေ့ပြီး ပရိသတ်တွေအံ့သြခဲ့ရပါတယ်။ အဖွဲ့ရဲ့ Agency ကတော့ တရားဝင်ထုတ်ဖော်မပြောခဲ့ပေမယ့် တော်တော်များများရဲ့ အဆိုးမြင်ဝေဖန်ချက်တွေကတော့ အင်တာနက်တစ်ခွင်မှာ ပြန့်နေပါပြီ။
မပြင်ခင်နှင့် ပြင်ပြီး နှာခေါင်းအခြေအနေ
အင်တာနက်အသုံးပြုသူအများစုက သူမရဲ့ မျက်နှာအနေအထား ပြောင်းလဲနေမှုကို သိသိသာသာသတိထားမိပြီး Social Network တွေပေါ်မှာ “သူမအရင်ထက်ပြောင်းလဲသွားတာသေချာပါတယ်” ၊ “အရင်မျက်နှာနဲ့ တခြားစီပဲ။ ငါတို့အရင်က သဘောကျတဲ့ Nam Joo မျက်နှာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး”၊ “သူမရဲ့ မေးရိုးကိုပြုပြင်လိုက်တာ ဖြစ်မယ်” ၊ “Nam Joo မှ ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာ သေချာအောင် Internet မှာ သေချာပြန်ကြည့်ရတယ်။ ပုံ ၂ပုံ ယှဉ်ကြည့်လိုက်တာ အရင်ရုပ်နဲ့ လုံးဝမတူတော့လောက်အောင်ပါပဲ။”ဆိုတဲ့ ဝေဖန်သံတွေများစွာ တက်လာခဲ့ပါတယ်။
Nam Joo ကတော့ ပိုလှချင်လို့ ခွဲစိတ်မိကာမှ ကြည့်မကောင်းတော့လို့ စိတ်ညစ်ရတဲ့အဖြစ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိန်းပါပဲ။ ဒီပုံတွေအားလုံးကိုကြည့်ပြီး သူမမျက်နှာပြုပြင်ထားတာ ဟုတ်မဟုတ်၊ အရင်ထက် ပိုရုပ်ဆိုးသွားလား ကြည့်ကောင်းနေဆဲလားဆိုတာ ပရိသတ်ကြီးကရော ထင်မြင်ချက်လေး ပေးကြည့်ပါဦး။
Ref. allkpop.com (Photo Credit)
ပိုလှခငျြလို့ ခှဲစိတျမိကာမှ ရုပျဆိုးသှားလို့ ဝဖေနျခံနရေတဲ့ Apink အဖှဲ့ရဲ့အဆိုတျောမလေး
ကိုရီးယားသူ ငယျငယျခြောခြောလေးတှနေဲ့ Plastic Surgery ဆိုတာ သမာရိုးကဖြွဈရိုးဖွဈစဉျ ခှဲမွငျလို့မရတဲ့ အလအေ့ထတှပေါပဲ။လူမြိုးတဈမြိုးလုံးရဲ့ အခွခေံမကျြနှာသှငျပွငျဗီဇအရ အာရှနိုငျငံတှမှောမှ ကိုရီးယား၊ တရုတျနဲ့ ဂပြနျနိုငျငံက လူမြိုးတှဟော မကျြရဈမပါတာမြိုး၊ မကျြနှာပွဲပွီး နှာခေါငျးမပျေါတာမြိုးတှကွေောငျ့ ပုံမှနျကွညျ့ကောငျးတဲ့ မကျြနှာတဈခုရအောငျ ခှဲစိတျပွုပွငျကွရပါတယျ။
နာမညျကွီး မငျးသားမငျးသမီး Celebrity တျောတျောမြားမြားလညျး အလားတူ အောငျမွငျမှု၊ ခြောမောလှပမှုတို့အတှကျ ခှဲစိတျလရှေိ့ကွပမေယျ့ ဒီအဆိုတျောမခြောခြောလေးရဲ့ ခှဲစိတျမှုကတော့ ပရိသတျအမြားစုလကျမခံနိုငျဘဲ ဝဖေနျပွဈတငျမှုတှေ သောသောညံခဲ့ရပါတယျ။
သူမကတော့ ကိုရီးယား နာမညျကွီး Apink အဆိုတျောအဖှဲ့က အဖှဲ့ဝငျ Nam Joo ပဲဖွဈပါတယျ။ မိနျးကလေးအဖှဲ့ဝငျ ငယျငယျခြောခြောလေး ၆ ယောကျနဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ Apink အဖှဲ့မှာ အားပေးသူပရိသတျအခိုငျအမာရရှိထားတဲ့ Nam Joo ကို သူမရဲ့ခှဲစိတျထားပုံရတဲ့အသှငျအပွငျအသဈနဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့ March လ ၂၄ ရကျ ကကငျြးပတဲ့ Baseball ပွိုငျပှဲတဈခုရဲ့ အကွို ဖြျောဖွပှေဲမှာတှရေ့တာဖွဈပွီး ပွိုငျပှဲအပွီးမှာ အရငျနဲ့မတူ တမူထူးခွားနတေဲ့ သူမရဲ့ နှာခေါငျးနဲ့ မကျြနှာအနအေထားကို သတိပွုမိတဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ သဘောထားတှေ ဆကျတိုကျဆိုသလိုတကျလာတာဖွဈပါတယျ။
မပွငျခငျ(လကျဝဲဘကျ) နှငျ့ ပွငျပွီး (လကျယာဘကျ)
ဒါ့အပွငျ Apink အဖှဲ့ Public Relations Ambassadors အဖွဈတာဝနျယူထားတဲ့ Korea-Africa Economic Cooperation Conference မှာလညျး သူမမကျြနှာပွောငျးလဲမှုကို မွငျတှပွေီ့း ပရိသတျတှအေံ့သွခဲ့ရပါတယျ။ အဖှဲ့ရဲ့ Agency ကတော့ တရားဝငျထုတျဖျောမပွောခဲ့ပမေယျ့ တျောတျောမြားမြားရဲ့ အဆိုးမွငျဝဖေနျခကျြတှကေတော့ အငျတာနကျတဈခှငျမှာ ပွနျ့နပေါပွီ။
မပွငျခငျနှငျ့ ပွငျပွီး နှာခေါငျးအခွအေနေ
အငျတာနကျအသုံးပွုသူအမြားစုက သူမရဲ့ မကျြနှာအနအေထား ပွောငျးလဲနမှေုကို သိသိသာသာသတိထားမိပွီး Social Network တှပေျေါမှာ “သူမအရငျထကျပွောငျးလဲသှားတာသခြောပါတယျ” ၊ “အရငျမကျြနှာနဲ့ တခွားစီပဲ။ ငါတို့အရငျက သဘောကတြဲ့ Nam Joo မကျြနှာမြိုးမဟုတျတော့ဘူး”၊ “သူမရဲ့ မေးရိုးကိုပွုပွငျလိုကျတာ ဖွဈမယျ” ၊ “Nam Joo မှ ဟုတျရဲ့လားဆိုတာ သခြောအောငျ Internet မှာ သခြောပွနျကွညျ့ရတယျ။ ပုံ ၂ပုံ ယှဉျကွညျ့လိုကျတာ အရငျရုပျနဲ့ လုံးဝမတူတော့လောကျအောငျပါပဲ။”ဆိုတဲ့ ဝဖေနျသံတှမြေားစှာ တကျလာခဲ့ပါတယျ။
Nam Joo ကတော့ ပိုလှခငျြလို့ ခှဲစိတျမိကာမှ ကွညျ့မကောငျးတော့လို့ စိတျညဈရတဲ့အဖွဈနဲ့ ရငျဆိုငျနရေတဲ့ကိနျးပါပဲ။ ဒီပုံတှအေားလုံးကိုကွညျ့ပွီး သူမမကျြနှာပွုပွငျထားတာ ဟုတျမဟုတျ၊ အရငျထကျ ပိုရုပျဆိုးသှားလား ကွညျ့ကောငျးနဆေဲလားဆိုတာ ပရိသတျကွီးကရော ထငျမွငျခကျြလေး ပေးကွညျ့ပါဦး။